Tantara: Daniela tao An-davaky ny Liona - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Ny mpanjakan’i Babylona izao dia lehilahy iray natao hoe Dariosy. Tiany aoka izany i Daniela satria tsara fanahy sy hendry tokoa i Daniela. Niﬁdy an’i Daniela ho komandy lehibe tao amin’ny fanjakany i Dariosy. Nahatonga ny lehilahy hafa tao amin’ny fanjakana hialona an’i Daniela izany, koa izao no nataon’izy ireo.
Rehefa fantatr’i Daniela ny momba ilay lalàna, dia nankany an-tranony izy ary nivavaka, tahaka ny efa fanaony hatramin’izay. Fantatr’ireo lehilahy ratsy fanahy fa tsy hitsahatra hivavaka amin’i Jehovah i Daniela. Faly izy ireo, satria toa hahomby ny ﬁkasany hanafoana an’i Daniela.
Iza moa i Dariosy, ary ahoana no ﬁheverany an’i Daniela?
Inona no nasain’ireo lehilahy be ﬁalonana nataon’i Dariosy?
Vakio ny Daniela 6:1-28.
Mampahatsiahy antsika izay nataon’ny mpanohitra, mba hampijanonana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah ankehitriny ireo tetika natao hamonoana an’i Daniela. Hazavao. (Dan. 6:7; Sal. 94:20; Isaia 10:1; Rom. 8:31)
Ahoana no anahafan’ny mpanompon’Andriamanitra an’i Daniela, rehefa manaiky hatrany ny “manam-pahefana”? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Asa. 5:29)
Ahoana no anahafantsika an’i Daniela, mba hanompoana an’i Jehovah “mandrakariva”? (Dan. 6:16, 20; Fil. 3:16; Apok. 7:15)